!!! ဦးဦးမာန် !!!
!!!လူသားအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ!!!မြန်မာ(Myanmar)နှင့် ပတ်သက်သမျှမည်သည့် အရာမျှမတင်ပါ။
!!!!! သတိ !!!!!
!!!ရုပ်ရှင်များ Download လုပ်ပြီးပါက VLC Media Player ဖြင့် ကြည့် ပါရန် Repair လုပ်ခိုင်းလျှင်လုပ်ပေးပါရန်
တက်တူး ထိုးချင်သူများ အတွက် In Korean Only
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 11:15 PM 11 comments
ပျော်တော်ဆက်လေးနဲ့Boyfriend
ပျော်တော်ဆက်ကောင်မလေးနဲ့သူရဲ့ချစ်သူကောင်လေးဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပဲဗျာ ။ ကောင်မလေးရဲ့အိမ်မှာတဲ့အင်တာနက်ပေါ် တင်လိုက်တဲ့သူက ကောင်မလေးတဲ့အဲ့လိုရေထားတာပဲ
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 8:25 PM 11 comments
Labels: ကိုရီးယား ဟုန်းမိတ်
ကိုရီးယား Model Girl Hidden Cam
ကိုရီးယားက ပျော်တော်ဆက်လုပ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအကုန်လုံး အဲ့ဒီကောင်မလေးအတိုင်းပဲဗျာ
နဲ့ နဲ့ လေး အချိန်ကြာလာတာနဲ့ ဂျီတော့တာပဲ အဲ့နိုင်ငံခြားသားကလည်း ဗျာပိုက်ဆံလည်းပေးရသေးတယ်
လက်အုန်ချီပြီးလည်းတောင်းပန်ရသေးတယ် တော်တော်အသုံးမကျတဲ့ ကောင်ဘဲ့အဲ့ကောင်မတွေကိုနိုင်ကွတ်ရှီတယ်ဗျ ရဲ ကိုသာဖုန်းဆက်လိုက်သေအောင်ကြောက်တယ် ရဲ ဆိုရင် ဘာလို့ လည်း ဆိုတော့ သူတို့အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ်လ် ပိတ်ခံရမှာဆိုးလို့ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော် လက်တွေဗျ
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 8:11 PM4comments
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 7:37 PM2comments
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 6:56 PM5comments
REPLAY ကိုရီးယားနာမည်ကြီး han sung joo
၅. ၁. ၂၀၁၂ အထိတောင်းဆိုထားတဲ့Email များအားလုံးကို ပို့ ပေးထားပါတယ် မရခဲ့သည် Email ပိုင်ရှင်များ ပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါ ပြန်ပို့ ပေးပါမယ်
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 6:42 PM 57 comments
Movie ရပါပြီဗျာ ကိုရီးယားနာမည်ကြီး han sung joo
Movie ရပါပြီဗျာ သို့ သော်ကျွန်တော် Blog ပေါ်မှာ ဒီ Movie ကို တင်လို့ မရလို့ ပါ တင်တာတွေတာနဲ့အဖမ်းခံရမှာမလို့ ပါ ကြည့် ရှု လို ပါက Comment တွင် Email ထားခဲ့ ပါ Email သို့ပို့ပေးပါမည်
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 3:53 AM 239 comments
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 6:26 PM 1 comments
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 6:18 PM3comments
Posted by !!!ဦးဦးမာန် !!! at 6:06 PM0comments
ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းများ (44) ဂျပန်ဇာတ်လမ်းရှည်များ (38) ကာတွန်3းDနဲ့ မှကြည့် ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုကိုများအတွက် (16) ကိုရီးယား ဟုန်းမိတ် (16) ဂျပန်ကားများ (12) ကောင်းရာနိုးနိုး (12) ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းရှည်များ (7) ထူးထူးခြားခြား (7) ထိုင်း 3gp (6) ကိုရီးယား ချက်တင် (4) 3D (2) ဂျပန်မှကလေးငယ်များ (2) ထိုင်း (2) ထူးခြာမှုဖြစ်စဉ် (2) အရည်ရွှန်းသောကကြီးမလေးများ (2) မြင်းစီးကောင်းသောဂျပန်မမလေးများ (2) China ကလေးငယ်များ (1) Comments (1) ထိုင်းကလေးငယ်များ (1) မာဆက် (1)
ကိုရီးယားက ပျော်တော်ဆက်လုပ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအကုန်လုံး အဲ့ဒီကောင်မလေးအတိုင်းပဲဗျာ နဲ့ နဲ့ လေး အချိန်ကြာလာတာနဲ့ ဂျီတော့တာပဲ အဲ့နိုင်ငံခြ...
ပျော်တော်ဆက်ကောင်မလေးနဲ့သူရဲ့ချစ်သူကောင်လေးဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပဲဗျာ ။ ကောင်မလေးရဲ့အိမ်မှာတဲ့အင်တာနက်ပေါ် တင်လိုက်တဲ့သူက ကောင်မလေးတဲ...
တင်ထားပြီးခဲ့ သမျှပို့ စ်များ
တင်ထားပြီးခဲ့ သမျှပို့ စ်များ 10/03 - 10/10 (13) 10/10 - 10/17 (41) 10/17 - 10/24 (18) 07/31 - 08/07 (17) 08/07 - 08/14 (7) 08/14 - 08/21 (11) 08/21 - 08/28 (14) 08/28 - 09/04 (16) 09/04 - 09/11 (4) 09/25 - 10/02 (1) 10/09 - 10/16 (9) 10/30 - 11/06 (3) 12/11 - 12/18 (18) 12/25 - 01/01 (6) 01/01 - 01/08 (1)
Firefox ဖြင့် ကြည့် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏
BROWSING !!! ဦးဦးမာန်!!! WITH FIREFOX IS THE BEST
Yangon, Burma Local Weather
နာမည်တူဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်နှင့် လုံးဝ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ
uumang2020@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
!!! ဦးဦးမာန် !!!. Ethereal theme. Powered by Blogger.